“သစ်သီးဘုရင်” အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာသီသပြင်းပြမှု မြင့်တက်လာခြင်းကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ထိုင်းလယ်သမားများ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက် - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံ ချန်သာဘူရီပြည်နယ်ရှိ ဒူးရင်းသီး စက်ရုံတွင် ဒူးရင်းသီး အမျိုးအစားခွဲနေသော အလုပ်သမားများအား မေ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘန်ကောက်၊ မေ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တစ်မီတာမြင့်သော သစ်ပင်ပေါ်သို့ ဖိနပ်မပါသော လူငယ်တစ်ဦး တက်လာခဲ့ပြီး ဓားတစ်လက်ဖြင့် ဒူးရင်းသီး ခူးဆွတ်ရန် အညှာကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ Miiw ဒူးရင်းခြံပိုင်ရှင် Silaphon Thongrot ထံသို့ ၄င်းဒူးရင်းသီးကို ပစ်ပေးလိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချန်သာဘူရီပြည်နယ်ရှိ ဒူးရင်းသီးခြံတစ်ခုအား မေ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ ချန်သာဘူရီပြည်နယ်ရှိ ဒူးရင်းသီးစက်ရုံအား မေ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ ချန်သာဘူရီပြည်နယ်ရှိ ဒူးရင်းသီးစက်ရုံတွင် ဒူးရင်းသီးတစ်လုံးအား ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေသော အလုပ်သမားတစ်ဦးကို မေ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နှစ်စဉ် မတ်လမှ ဇူလိုင်လအထိ ထိုင်း ဒူးရင်းသီးစိုက်ပျိုးသူများသည် ဘောလုံးအရွယ်အစားရှိပြီး ဆူးရှိသောသီးနှံဖြစ်သည့် ဒူးရင်းသီးများကို တရုတ်စားသုံးသူများ၏ အာသီသ ပြင်းပြမှုကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
“ဒူးရင်းသီးရာသီရောက်လာပြီဆိုရင် တစ်နှစ်ကို ဒူးရင်းသီး ၈,၀၀၀ ကျော်လောက် ခူးဆွတ်ရတယ်” ဟု ဒူးရင်းသီးပင်ပေါ်မှ ၎င်းထံသို့ ပစ်ချပေးလိုက်သည့် ဒူးရင်းသီးကို ကြည့်လျက် Silaphon က ပြောခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် သီးနှံမြို့တော် ချန်သာလူရီပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော Silaphon ၏ မိသားစုခြံသည် ဒူးရင်းပင်ရာပေါင်းများစွာ စိုက်ပျိုးထားပြီး အပင်တစ်ပင်ချင်းစီတွင်လည်း အသီးပေါင်းမြောက်များစွာ သီးနေကြသည်။ ထူးခြားသောပုံသဏ္ဍာန်၊ ခပ်ပြင်းပြင်းရနံ့၊ ချိုချိုအီအီ အရသာရှိသော ဒူးရင်းသီးကို “သစ်သီးတို့၏ ဘုရင်” ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဒူးရင်းသီးများသည် တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်တွင် လွှမ်းမိုးထားသည်။ “ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒူးရင်းသီး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို တရုတ်နိုင်ငံ တင်ပို့ပါတယ်။ ဝယ်လိုအားတွေကလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် များလာတယ်” ဟု မိသားစုပိုင် ဒူးရင်းခြံတွင် ၁၅ နှစ်ခန့် စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်နေသော Silaphon က ဆိုသည်။
“ဂျပန်၊ ဩစတြေးလျနဲ့ တောင်ကိုရီးယား စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့ ဒူးရင်းသီး ပမာဏနည်းနည်း တင်ပို့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဈေးကွက်တွေက တရုတ်ကိုတင်ပို့ရတဲ့ ပမာဏနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ တော်တော်လေး နည်းသေးတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် ဒူးရင်းသီး တင်ပို့မှုမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ လေးဆနီးပါးရှိလာခဲ့ပြီး ထိုင်း-တရုတ် သီးနှံကုန်သွယ်ရေးအတွက် ကြီးမားသော အခွင့်အလမ်းများပံ့ပိုးပေးလျက် ပြောင်းလဲမှုမြင့်မားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပုံစံကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု (RCEP) သဘောတူညီချက် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ လျင်မြန်စွာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြင့် ထပ်မံဖြည့်တင်းလိုက်ဖွယ်ရှိသည်။
ယခုနှစ် ပထမဆုံး အာဆီယံ (ASEAN) သစ်သီးရထားသည် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီး ကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Pingxiang မြို့သို့ ဇန်နဝါရီလတွင် ရောက်ရှိခဲ့သလို ပထမဆုံး “ဒူးရင်းအမြန်ချောပို့” မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ကျိုးမြို့သို့ ဧပြီလက ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းကလည်း ရထားလမ်းချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ထိုင်းသီးနှံများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလာနိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်။
အမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ထောက်ပံ့သယ်ပို့ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်သာမက တစ်နေရာတည်းတွင် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ချက်များမှတစ်ဆင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြာမြင့်ချိန်ကိုလည်း ကြီးမားစွာလျှော့ချပေးသည်။
ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ တက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုလေ့လာရေးစင်တာ (CITS) ညွှန်ကြားရေးမှူး Aat Pisanwanich က ပြောခဲ့သည်။
“ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရထားလမ်းချိတ်ဆက်မှုဟာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ပြီးပြည့်စုံပါက သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ကြာမြင့်ချိန်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျစေမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်း-တရုတ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအသင်း၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ Nuttakij Oranhirunruk က ယခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံ တင်ပို့မှုသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာမည်ဟုအပြည့်အဝယုံကြည်ကြောင်း၊ အရှေ့ပိုင်း စိုက်ပျိုးရေးဇုန်ကလည်း ယခုနှစ်အတွင်း ကွန်တိန်နာ ၃၅,၀၀၀ တင်ပို့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ ယခင်နှစ်က ကွန်တိန်နာ ၂၅,၀၀၀ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Nuttakij သည် ဒူးရင်းသီး ထောင်ပေါင်းများစွာ ပုံထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံ တံဆိပ်ကပ်ထားသော သေတ္တာ ရာပေါင်းများစွာ ဝန်းရံထားသော ချန်သာဘူရီပြည်နယ်တွင် ဒူးရင်းသီးထုပ်ပိုးမှုစက်ရုံတစ်ရုံ ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။ သေတ္တာများအတွင်း စည်းတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပြီးနောက် သစ်သီးများကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရာလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
RCEP မှ ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် ထင်သာမြင်သာရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများရှိလင့်ကစား ထိုင်း ဒူးရင်းသီးများသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထံမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဦးမည်ဖြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဒူးရင်းသီး အမျိုးအစား Musang King သည်လည်း မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ နှစ်သက်မှု အမြောက်အများ ရရှိထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ သစ်သီးတင်ပို့သူများသည် တရုတ် စားသုံးသူများ၏ စိတ်နှလုံးသားဝယ် ရှေ့ဆုံးထိပ်တန်း၌ ရောက်ရှိနိုင်စေရန် သန့်ရှင်းမှုစံချိန်စံနှုန်းများကို ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ကာ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကိုလည်း ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြရမည်ဟု Aat က ဆိုသည်။
Silaphon ၏ စီမံကိန်းတွင်မူ ၎င်း၏ စိုက်ပျိုးရေးခြံအနေဖြင့် Monthong ဒူးရင်းသီးအမျိုးအစားအပြင် အမျိုးမျိုးသောဝယ်လိုအားများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် အရည်အသွေးမြင့်မျိုးကွဲများကိုလည်း ပျိုးထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တရုတ်ဈေးကွက်တွင် ရောင်းအားချဲ့ထွင်ရန် e-commerce ကိုလည်း ခြေလှမ်းပြင်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Thai farmers gear up to satisfy China’s growing appetite for “king of fruits”
BANGKOK, May 18 (Xinhua) — A young man climbed barefoot onameters-tall tree, slashed the stalk withaknife to pick durian, and then threw the fruit at Silaphon Thongrot, owner of the Miiw’s durian orchard in Thailand.
From March to July each year, Thai durian farmers are all geared to address China’s craving for the football-sized and thorny fruit.
“When durian season is in full swing, up to 8,000 durians are picked in one day,” Silaphon said while catchingadurian flying towards her fromadurian tree.
Located in the Chanthaburi province, the renowned fruit capital of Thailand, Silaphon’s orchard is home to hundreds of durian trees with dozens of fruit on each of them. For its distinctive shape, intensive smell and rich custard-like flavor, durian is also called the “king of fruits.”
Currently, durians from Thailand are dominating the Chinese market. “Up to 100 percent of our durians are shipped to China, and the demand is increasing year by year,” said Silaphon, who has managed her family’s durian orchard for around 15 years.
“We also exportasmall amount of durian to Japan, Australia and South Korea, but these markets are still very small compared to the amount exported to China,” she added.
China’s annual durian imports rose almost fourfold from 2017 to 2021,askyrocketing trend that provides great opportunities for the Thailand-China fruit trade.
This pattern is likely to be further fueled by the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement, the world’s largest free trade deal to date, and the rapidly evolving transportation infrastructure in the region.
This year the first ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations) fruit train arrived in Pingxiang, southern China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, in January and the first “Durian Express” reached the southern Chinese city of Guangzhou in April. Moreover, the China-Laos railway made it possible for Thai fruits to be transported to China via road-rail link.
The diversified modes of transportation not only reduce the logistics costs, but also greatly shorten cross-border transportation time through measures like one-stop customs clearance.
By means of road-rail transport, the time and cost of exporting to China have been reduced by around 30 percent, said Aat Pisanwanich, director of the Center for International Trade Studies (CITS) at the University of the Thai Chamber of Commerce.
“If the rail-link from Thailand has been connected and completed, it is expected to help reduce time and cost of transportation by about 60 percent,” he added.
Nuttakij Oranhirunruk, vice president of the Thai-Chinese Agribusiness Association, is full of confidence in the substantial growth of Thai durian exports to China this year, saying that the eastern agricultural zone is expected to export 35,000 containers this year, compared to 25,000 last year.
Nuttakij also runsadurian packing factory in Chanthaburi, where thousands of durians are neatly stacked, surrounded by hundreds of Chinese labeled cardboard boxes. After being sealed in the boxes and disinfected, the fruits will be on their way to China inafew days.
Despite the significant benefits brought by the RCEP, Thai durian will face fierce competition from neighboring countries. Malaysia’s Musang King variety has gained numerous devotees in China in recent years.
Thai fruit exporters must prioritize sanitary standards and focus more on production quality to keep Thai durian at the forefront of Chinese consumers’ minds, Aat said.
In Silaphon’s plan, her orchard will be cultivating more high-quality varieties beside Monthong to meet diverse demands, and also set foot in e-commerce to expand sales in the Chinese market.■
Photo 1 : Workers sort durians atadurian processing factory in Chanthaburi Province, Thailand, May 5, 2022. (Xinhua/Wang Teng)
Photo2: Photo taken withadrone showsadurian orchard in Chanthaburi Province, Thailand, May 5, 2022. (Xinhua/Wang Teng)
Photo3: Photo taken on May 5, 2022 shows durians atadurian processing factory in Chanthaburi Province, Thailand. (Xinhua/Wang Teng)
Photo4: A worker disinfectsadurian atadurian processing factory in Chanthaburi Province, Thailand, May 5, 2022. (Xinhua/Wang Teng)